Fikradaha Khaldan ee Ku Saabsan CBD: 8 Waxyaabaha Dadku Ku Khaldamaan • Daroogooyinka Inceu
Qalad ku saabsan CBD: 8 waxyaalaha dadka waa khalad
Kama sarreyn doontid CBD, laakiin waxay kicineysaa jahwareer ka dhex jira saynisyahannada caafimaadka iyo bukaannada.
1 CBD waa caafimaad. THC waa madadaalo
2 THC waa xun cannabinoid. CBD waa cannabinoid wanaagsan
3 CBD waa midda ugu waxtarka badan iyada oo aan la helin THC
4 Daawooyinka kali keli keli ah ayaa ka sarreeya daawooyinka dhirta oo dhan "cayriin"
5 Cilmu-nafsiga waxay u dhigantaa saameyn taban
6 CBD waa sharci dhammaan 50ka dawladood ee Mareykanka
7 Shuruucda keliya ee CBD waxay si habboon ugu adeegaan dadka buka
8 CBD waa CBD, meel kastoo ay ka timidba
Sannadkii la soo dhaafay, waxaa jiray xiiso badan oo loo yaqaan 'CBD' oo laga soo saaray marijuana, oo ah xarun laga helo daroogada cannabis oo leh astaamo caafimaad oo muhiim ah.
Shirkado badan oo ganacsi bilow ah iyo tafaariiqleyaal internet ah ayaa ku fuulay tareenka CBD, iyaga oo tilmaamaya CBD oo laga soo qaaday hemp warshadaha sida tan xigta ee weyn, saliid mucjiso ah oo yareyn karta burooyinka, xakamayn karta weerarada isla markaana yareyn karta xanuunka daba dheeraada dareemid 'dhagax' Laakiin ay weheliso wacyigelin sii kordheysa oo ku saabsan cannabidiol sida qalab caafimaad oo suurtagal ah, waxaa soo kordhay fikradaha qaldan ee laga qabo CBD.
CBD waa caafimaad. THC waa madadaalo
Mashruuca CBD waxay ka heshaa weydiimo badan adduunka oo dhan waxayna badanaa dadku sheegaan inay raadinayaan 'CBD, qaybta caafimaadka' ee dhirta, 'maahan THC, qaybta madadaalada 'ee kugu sareysa. THC, "Sababaha Sare", si kastaba ha noqotee, wuxuu leeyahay sifooyin daaweyn oo weyn. Tusaale ahaan, saynisyahanno ka tirsan Xarunta Cilmi Baarista ee Scripps ee San Diego waxay soo sheegeen in THC ay hor istaagto enzyme ku lug leh sameynta huurada beta-amyloid, oo ah astaamaha cudurka asaasaqa ee la xiriira Alzheimer.
Dawladda federaalku waxay u aqoonsan tahay THC (Marinol) oo leh hal moleele oo kaliya sida anti-lallabbo iyo cunno cunno, waxayna u aragtaa inay tahay dawada 'Schedule III', oo ah nooc loogu tala galay walxaha daawooyinka leh ee aan badneyn waxyeelada. Laakiin geedka marijuana oo dhami, oo ah isha kaliya ee dabiiciga ah ee THC, ayaa wali lagu tilmaamaa inuu yahay daawo khatar ah oo jadwalka I ah oo aan qiimo caafimaad laheyn.
THC waa xun cannabinoid. CBD waa cannabinoid wanaagsan
Dib-u-gurashada Istiraatiijiga ah ee La-Dagaalamayaasha Daroogada: Meel u sii CBD marka aad sii waddo jinka THC. Dagaalyahannada xashiishadda 'Diehard marijuana' ayaa ka faa'iideysanaya warka wanaagsan ee ku saabsan CBD si ay u sii cambaareynayaan xashiishadda sare ee THC, iyagoo u tuuraya tetrahydrocannabinol sida xun ee cannabinoid, halka CBD loo arko inay tahay mid wanaagsan cannabinoid. Sababta Sababtoo ah CBD kuma sarraysiinayso sida ay THC u hesho.
Mashruuca CBD wuxuu si guud u diidayaa anshax-xumada, waallida daciifka ah ee door bididda daaweynta geedka cannabis geedaha oo dhan. (Sidoo kale aqri cilmi baarista aasaasiga ah: Sheeko laba Cannabinoids ah)
CBD waa midda ugu waxtarka badan iyada oo aan la helin THC
THC iyo CBD waa lammaanaha awoodda badan ee xashiishadda cannabis - waxay si fiican u wada shaqeeyaan. Daraasado cilmiyaysan ayaa muujiyey in CBD iyo THC ay si iskumar ah u shaqeeyaan si kor loogu qaado saamaynta daweynta ee midba midka kale. Baarayaasha Ingriiska waxay muujiyeen in CBD ay xoojiso astaamaha anti-bararka ee THC oo ah nooc xayawaan ah oo loo yaqaan 'colitis'.
Seynisyahanno ka tirsan Xarunta Caafimaadka ee California Pacific ee ku taal San Francisco waxay go'aamiyeen in isku-darka CBD iyo THC ay leeyihiin saameyn xoog leh oo ka-hortagga buro-bararka marka loo eego labada iskeed u gaarka ah - markii lagu baaro khadadka unugyada kansarka maskaxda iyo naasaha. Iyo cilmi baaris ballaaran oo daaweyn ah ayaa muujisay in CBD oo ay weheliso THC ay faa'iido badan u leedahay xanuunka neuropathic marka loo eego labada isku-darka sida hal mekole.
Daawooyinka kali keli keli ah ayaa ka sarreeya daawooyinka dhirta oo dhan "cayriin"
Marka loo eego dawladda federaalka, qaybo gaar ah oo ka mid ah geedka cannabis (THC, CBD) waxay leeyihiin qiime caafimaad, laakiin warshadda lafteeda ma leh qiime caafimaad. Qaab-dhismeedka hal-doorka dowladaha wuxuu ka turjumayaa dhaqan iyo siyaasad xamaasad u leh badeecooyinka Big Pharma. Dawada hal-doorka hal-doorku waa habka ganacsiga ugu weyn, habka FDA-u ansaxiyay Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, tani maahan wadada kaliya ee runtiina lama huraan inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​daaweynta ku saleysan cannabis.
Cilmu-nafsiga waxay u dhigantaa saameyn taban
Marka loo eego weedhaha siyaasadeed ee saxda ah ee ku saabsan "dagaalka" daroogada, marijuana badan ayaa ah saameyn aan loo baahnayn. Big Pharma wuxuu jecel yahay inuu soo saaro maaddooyinka u eg kuwa marijuana-ta ee caafimaadka leh ee aan dadka sare u qaadin - in kasta oo aysan sinaba u caddayn sababta dareenka euphoric ee khafiifka ahi si dabiici ah ugu xun yahay qof jirran ama caafimaad qaba.
Giriiggii hore, euphoria ereyga 'euphoria' waxaa loola jeeday 'inaad yeelato caafimaad', xaalad ladnaan. Marka laga reebo inay tahay saameyn aan caafimaad qabin, sifooyinka euphoric ee cannabis waxay si qoto dheer ugu lug leeyihiin qiimaha daaweynta ee dhirta.
Waa inaan marka hore u aragnaa xashiishka daawo ahaan, ayuu yidhi Dr. Tod Mikuriya, “Taasi, sida daroogooyinka badan, waxay leedahay astaamo nafsiyeed oo gaar ah, halkii ay ka ahaan lahayd maandooriye dhacda inay yeeshaan waxyaabo daaweyn ah. “
CBD waa sharci dhammaan 50ka dawladood ee Mareykanka
Shirkadaha keena saliida hemp-ga la soo dhoofiyo ee la soo dhoofiyo waxay sheeganayaan inay sharci tahay in la suuq geeyo alaabtooda meel kasta oo Mareykanka ah ilaa iyo inta saliida ay ku jirto wax ka yar 0,3 boqolkiiba THC. Runtii ma sahlana sidaas.
Sharciga federaalka wuxuu ka mamnuucayaa beeraleyda Mareykanka inay koraan hemp sida dalag ganacsi, laakiin iibinta la soo dhoofiyo, THC wax soo saarka hemp warshadaha ayaa loo oggol yahay Mareykanka illaa iyo inta alaabooyinkan ay ka soo jeedaan iniinyaha ama jiridda dhirta, oo aan ahayn caleemaha iyo ubax. Waa kan qabashada: Cannabidiol lama cadaadin karo ama lagama soo saari karo abuurka hemp. CBD waxaa laga soo saari karaa ubaxa, caleemaha iyo ilaa xad aad u yar oo ka soo jeeda asliga geedka hemp. Shirkadaha bilawga ah ee saliida hemp ma lahan kalsooni badan markay dhahaan CBD-du waxay ka timaadaa abuur iyo jirid.
Shuruucda keliya ee CBD waxay si habboon ugu adeegaan dadka buka
Qaar ka mid ah sharci-dajiyayaasha Mareykanka ayaa ansixiyay sharciyada 'CBD oo keliya' (ama 'THC' hooseeya), gobollo kalena waxay diyaar u yihiin inay ku daydaan. Gobollada qaarkood waxay xaddidaan ilaha laga helo badeecooyinka hodanka ku ah CBD waxayna caddeeyaan cudurrada laga heli karo CBD; dadka kale ma. Shuruucdani waxay si muuqata u oggolaanayaan isticmaalka saliidda la shubay ee CBD ee laga soo qaaday hemp ama xashiishka cabbiraya wax ka yar 0,3 boqolkiiba THC.
Laakiin daawaynta hodanka ah ee CBD-da leh 'THC' yar uma shaqeyso qof walba. Waaliddiinta carrurta suuxdinta leh waxay ogaadeen in ku daridda THC (ama THCA, nooca ceyriinka ah, ee aan la daaweyn ee THC) xaalado badan ay ka caawineyso xakameynta suuxdinta. Dhibaatooyinka qaarkood, noocyada loo yaqaan 'THC' ee xoogga badan ayaa ka waxtar badan badeecadaha hodanka ku ah CBD.
Bukaannada intiisa badani si fiican ugama adeegan dhammaan sharciyada loogu yeero "CBD kaliya". Waxay u baahan yihiin marin ballaaran oo daaweyn xashiishad oo dhan ah, ma ahan oo keliya daroogada THC ee hooseysa. Hal cabir kuma wada habboona daawaynta xashiishka, ama hal dhisme, hal shey, hal cannabinoid ama hal culeys.
CBD waa CBD, meel kastoo ay ka timidba
Haa, waa muhiim. Ubaxyada dusha sare iyo caleemaha qaar ka mid ah noocyada cimilada warshadaha waxay noqon karaan ilo laga heli karo CBD (in kasta oo ay jiraan arrimo xagga sharciga ah), laakiin hemp macnaheedu sinnaba ugama jiro ilaha ugu wanaagsan ee cannabidiol. Hemp-ka warshadaha badanaa wuxuu ka koobanyahay cannabidiol aad uga yar kansarka qaniga ku ah CBD. Qadar fara badan oo hemp warshadeed ayaa looga baahan yahay in laga soo saaro qadar yar oo CBD ah, taas oo kordhinaysa halista sunta sunta ah maxaa yeelay hemp waa "bio-accumulator" oo biraha culus ka soo saara ciidda.
Hal molecule CBD, oo lagu soosaaray shaybaarka ama laga soosaaray lagana sifeeyey hemp warshadaha, ayaa waxaa ka maqan daawo muhiim ah terpenes iyo sare cannabinoids ku dhaca noocyada xashiishadda. Xeryadan waxay la falgalaan CBD iyo THC si kor loogu qaado faa'iidooyinka daaweynta.
Ilaha waxaa ka mid ah Healthline (EN), TheFreshToast (EN), TheGrowthOP (EN)
CBDsaliid cbdgo'aan qaadashowaxbarashadadaawocilmi baarisTHCMaraykankasaliida cannabis
55 bilyan oo doolar sanadkiiba, sharciga cannabis wuxuu u horseedi karaa iibka khamriga iyo kuwa sigaarka
Shirkadaha caalamiga ee aalkolada iyo tubaakada waxay waayi karaan $ 55 bilyan sanadkii hadii ay gebi ahaanba ...